GEDO: Yaan godob kale loo celin | KEYDMEDIA ONLINE
GEDO: Yaan godob kale loo celin
Jeerkii la baacsaday rajiimkii dhiigya cabka ahaa ee ay jajuubeen jabhadihii cartamayayey waxa uu hiil ka dalbaday tolkiis dantuna waxa ay tiri "Gedo mooyee guri kale oo aad ku ganbataa kaama gadaaleeyo".
21 sano oo uu talada hayey ma jirin wax uu gaar u taray Gedo balse waxaaba la oran karay in uu kas uga qadiyeu waddooyinkii, warshadihii iyo kaabayaashii dhaqaale.
Mar uu ka sheekeynayey Idaajaa safar ay Gedo dhexdeeda burburkii kaddib ku wada galeen isaga iyo Siyaad Barre waxa uu qeexay in uu Siyaad ka cawday jag-jagta gaariga ku dul soconaya wadada dhagaxa ah, waxase uu Idaajaa ku yiri "21 sano maxaad u dhisi weyday, maxaadse noo qabatay".
Gedo waxaa ugu dambeyntii qabsaday Janaraal Caydiid oo ku raadjoogay Siyaad Barre xaqiiqada halkaas loogu tegey ayaase ahayd in ay shicibka iyo odayaasha dhaqankuba shallaay ka joogeen ina Siyaad oo dalkii burburiyey, iyagana ku diga rogtay.
Iminka markale ayaa Gedo lagu xiray masiirka dalka oo Farmaajo waxa uu doonayaa in haddii uu dalku burburo uu Gedo maciiinsado halkaas oo uu horay ugu sii daabushay hub iyo ciidan.
Marnaba Gedo kuma uusan leexin barnaamij hormanid, dhismo, kaabayaal dhaqaale, garoommo iyo ceelal, hubka oo qura ayuu ugu roonaaday si ay u holacdo ugu dambeynta.
Dadka Gedo deggan oo ah kuwa Soomaalida ugu gobsan dadnimo ahaan waa in ay iska diidaan in masiirka dalka loo gabagabeeyo dartood, kana digtoonaadaan in ay dambas u noqdaan dab soo holcaya oo lagu kicinayo magacooda.
Cabdalla Qaasim Daamey